Dambudziko Mari Mari - China Dambudziko reMari Vagadziri uye vanotengesa
Gamuchira mari yakasarudzika pamutengo wekukwikwidza neakakosha kukosha Imwe neimwe yemari yechinetso ine dhizaini yakasarudzika iri yesangano rinomiririra, sematavi emauto, zvikamu zvakasiyana, mapoka akasarudzika uye nemamishini chaiwo. Nhengo dzeSevhisi dzinozivikanwa kugadzira hukuru hukuru hwematare edenha panguva yavo muchiuto. Vanonzwa kudada uye kunzwa kwekuve kwavo pavanoratidza mari yavo dzakasiyana. Kubva 1984, fekitori yedu yakapa mamirioni emadhora echinetso chemari pamwe ne100% kugutsikana, mari yedu yemari inogovera 90% yemusika weEuropean neUSA. Dambudziko remari yakakwenenzverwa kuti ifanane neako chaiwo maratidziro. Nezvechokwadi dhizaini kuchinjika, unogona kusarudza imwe kana maviri mativi emari ane ruvara pane rimwe kana mativi ese. Kana iwe uine pfungwa yaunoda kuyedza, igovana nesu, isu tinoshanda newe kuti uve nechokwadi chekuti dhizaini yako ndizvo zvese zvaunoda kuti zvive! Magadzirirwo ● Chinyorwa: zinc alloy, ndarira, sterling silve ● Saizi yakajairwa: 38mm / 42mm / 45mm / 50mm ● Mavara: kutevedzera yakaoma enamel, yakapfava enamel kana isina mavara ● Pedzisa: kupenya / matte / antique, maviri matoni kana girazi mhedzisiro, matatu mativi kupora ● Hapana MOQ kukamurwa ● Pasuru: bubble bhegi, PVC homwe, deluxe velvet bhokisi, bepa bhokisi, mari yemari, lucite yakadzamidzirwa
Liquid Glitter Mari
Kufa Yakarohwa Brass Mari
Pepa Kurema neChein Embed
Translucent Enamel Dambudziko Mari